Wararka - 9-ka ugu sarreeya moodada iyo moodooyinka warshadaha ee 2021
Dharka & Dharka gaaban
9-ka isbeddel ee moodada iyo dharka ee ugu sarreeya 2021
Warshadaha moodada iyo dharku waxay qaadeen jihooyin xiiso leh sanadkii la soo dhaafay. Qaar ka mid ah isbeddelladan waxaa kiciyay masiibada iyo isbeddellada dhaqameed ee laga yaabo inay yeeshaan saameyn joogto ah sanadaha soo socda.
Iibiye ahaan warshadaha, la socoshada isbeddelladan waa daruuri buuxda. Maqaalkan, waxaan ku burburin doonaa 9 ka mid ah isbeddellada ugu sarreeya ee moodada iyo labbiska ka hor inta aynaan u gelin qaar ka mid ah saadaasha 2021 ee warshadaha. Waxaan wax ku soo gabagabeyn doonaa annagoo ka doodi doona qaar ka mid ah tabaha ugu wanaagsan ee iibinta dharka Alibaba.com.
Aynu eegno qaar ka mid ah xisaabaadka warshadaha degdega ah si aan u bilowno.
Warshadaha moodada ee jaleecada
9-ka isbeddel ee ugu sarreeya ee moodada iyo warshadaha dharka
2021 moodada iyo saadaasha warshadaha dharka
Talooyin ku saabsan iibinta dharka on alibaba.com
Fikirka ugu dambeeya
Warshadaha moodada marka la eego
Ka hor inta aynaan u gelin isbeddellada sare ee warshadaha moodada iyo dharka, aynu si degdeg ah u eegno sawirka warshadaha ee heer caalami.
Warshadaha moodada degdega ah ee caalamiga ah waxay ku socdaan xawli ay ku kacayaan 44 bilyan USD sanadka 2028.
Wax iibsiga onlaynka ah ee warshadaha moodada ayaa la filayaa inay gaadho 27% sanadka 2023 maadaama dukaameystayaal badan ay dharka ka iibsadaan khadka.
Mareykanka ayaa hormuud u ah saamiyada suuqyada caalamka, waxaana suuqiisa lagu qiimeeyaa 349,555 milyan USD. Shiinaha ayaa ku xiga 326,736 milyan USD.
50% iibsadayaasha B2B waxay u jeestaan ​​intarneedka markay raadinayaan moodada iyo alaabada labbiska.
Warbixinta Warshadaha 2021
Warshadaha Dharka iyo Dharka
Fiiri Warbixintii Warshadaha Dharka ee ugu dambeysay oo ku baraysa xogtii ugu dambeysay ee warshadaha, alaabada isbeddelaysa, iyo talooyinka iibka ee Alibaba.com
Sida aan soo sheegnay, moodada iyo warshadaha dharka ee caalamiga ah waxay arkeen isbeddello waaweyn sanadkii la soo dhaafay. Aynu eegno 9-ka isbeddel ee ugu sarreeya warshadahan.
1. e-ganacsigu wuu sii socdaa
Wax iibsiga onlaynka ah ayaa caan ku ahaa macaamiisha dhowr sano, laakiin xidhitaannada COVID ee la xidhiidha, dukaamada ayaa lagu qasbay inay xidhaan bilo badan. Nasiib darro, xidhitaanno ku meel gaar ah oo badan ayaa noqday mid joogto ah maadaama dukaamadan ay awoodi waayeen inay nuugaan khasaaraha oo ay dib u soo noqdaan.
Nasiib wanaag, e-ganacsigu wuxuu horeyba u noqday caado ka hor masiibada, sidaa darteed ganacsiyada qaar waxay awoodeen inay ku noolaadaan iyagoo u wareegaya eCommerce ku dhawaad ​​​​si gaar ah. Waqtigan xaadirka ah, ma jiraan faa'iidooyin badan oo ganacsiyada si ay ugu noqdaan iibinta bulukeetiga iyo dukaamada hoobiyeyaasha, sidaas darteed waxay u badan tahay in ecommerce uu sii wadi doono inuu koro.
2. Dharka oo noqda mid aan jinsi lahayn
Fikradda jinsiga iyo "caadooyinka" ku xeeran dhismooyinkan ayaa horumaraya. Qarniyo badan, bulshadu waxay rag iyo dumar ku dhejisay laba sanduuq oo kala duwan. Si kastaba ha ahaatee, dhaqamo badan ayaa isku rogaya khadadka, dadkuna waxay bilaabeen inay xidhaan dhar ay ku raaxaystaan ​​​​intii loo qoondeeyey iyaga oo ku salaysan jinsigooda.
Tani waxay kicisay abuurista dhar badan oo aan jinsi lahayn. Halkaa marka ay marayso, waxa jira dhawr nooc oo aan dheddig lahayn, laakiin magacyo badan ayaa ku daraya khadadka "Aasaaska" unisex. Qaar ka mid ah noocyada ugu caansan ee aan jinsiga lahayn waxaa ka mid ah indho la'aan, Hal DNA, iyo Muttonhead.
Dabcan, inta badan warshadaha moodada waxay u kala qaybsan yihiin "ragga," "haweenka", "wiilka" iyo "gabdhaha," laakiin fursadaha unisex ayaa siinaya dadka inay ka xishoodaan calaamadahaas haddii ay doorbidaan.
3. Kordhinta iibka dharka raaxada leh
COVID-19 waxa uu bedelay habka ay dad badan u nool yihiin. Iyadoo dad badan oo waaweyn ay u wareegayaan shaqada fog, carruurtu waxay u wareegayaan waxbarasho fog, iyo meelo badan oo caamka ah oo la xiray, dadku waxay ku qaadanayeen waqti badan guriga. Tan iyo markii ay dadku ku xayiran yihiin guriga, waxaa si weyn u kordhay iibka ciyaaraha fudud1 iyo dharka fadhiga.
Bishii Maarso 2020, waxaa jiray koror 143%.2 iibka jiifka oo ay weheliso hoos u dhac 13% ah iibka rajabeetada. Dadku waxay bilaabeen inay mudnaanta siiyaan raaxada isla markiiba fiidmeerta.
Saddexdii bilood ee ugu dambeeyay 2020, tafaariiqleyaal badan oo moodooyinka ayaa bilaabay inay aqoonsadaan in raaxada ay fure u noqotay. Waxay abaabuleen ololahooda si ay u xoojiyaan alaabta ugu raaxada badan ee la heli karo.
Maadaama ganacsiyo badani ay sii wadaan inay dadka u oggolaadaan inay ka shaqeeyaan guriga, waxaa suurtogal ah in isbeddelkani uu jiro muddo dheer.
4. Dhaqanka iibsashada anshax iyo waara
Sanadihii la soo dhaafay, tiro badan oo dadweyne ah ayaa u soo jeediyay dareenka arrimaha bulshada ee la xiriira warshadaha moodada, gaar ahaan marka ay timaado moodada degdega ah.
Bilawga, qashinka dunta3 waxa uu joogaa heerkii ugu sareeyey abid sababtoo ah dhaqamada kharash garaynta macaamiisha. Dadku waxay iibsadaan dhar ka badan inta ay u baahan yihiin, balaayiin tan ayaa qashinka ku soo gala sannad kasta. Si loola dagaallamo qashinkan, dadka qaarkiis waxay u janjeeraan dhanka noocyada soo saara alaab tayo sare leh oo loogu talagalay inay muddo dheer sii jiraan ama kuwa isticmaala alaab dib loo warshadeeyey si ay u abuuraan dharkooda.
Arrin kale oo anshaxeed oo inta badan soo baxda waa isticmaalka dhididka. Fikradda ah in shaqaalaha warshadda la siiyo dinaar si ay ugu shaqeeyaan xaalad aad u liidata kuma qanacsana qaar badan. Maaddaama wacyigelin badan la keenayo arrimahan, macaamiil badan ayaa doorbidaya noocyada isticmaala hab-dhaqannada ganacsiga ee caddaaladda ah4.
Marka ay dadku sii wadaan inay u beddelaan qaab nololeedkooda xagga waaritaanka iyo wixii la mid ah, isbeddelladani waxay u badan tahay inay sii socdaan sannadaha soo socda.
5. Kobaca "ReCommerce"
Sanadkii la soo dhaafay, "Dib-u-ganacsi" ayaa noqday mid caan ah. Tani waxa ay tilmaamaysaa ka iibsashada dharka la isticmaalay dukaanka wax lagu iibiyo, dukaanka shixnadaha, ama si toos ah iibiyaha internetka. Macaamiisha suuqyada macmiisha sida LetGo, DePop, OfferUp, iyo suuqyada Facebook ayaa dhab ahaantii fududeeyay isbeddelka "Dib-u-ganacsiga".
Qayb ka mid ah isbeddelladani waa inay xidhiidh la leedahay u wareegidda iibsashada deegaanka-saaxiibtinimo iyo yaraynta qashinka, laakiin "kor u kaca" iyo dib-u-soo-celinta qaybaha canabka ah ayaa iyaguna kor u kacay. Baaskiil wadida asal ahaan waa marka qof uu qaato shay lebbis ah oo uu dib u habayn ku sameeyo si uu u qaabeeyo. Mararka qaarkood, tani waxay ku lug leedahay dhimista, goynta, iyo tolida dharka si loo sameeyo wax cusub.
Soo jiidashada kale ee ugu weyn ee ReCommerce ee macaamiisha waa inay heli karaan dharka si tartiib ah loo isticmaalo qayb ka mid ah qiimaha tafaariiqda.
6. Mooshin gaabis ah ayaa la wareegaya
Dadku waxay bilaabeen inay hoos u eegaan moodada degdega ah sababtoo ah saameyntiisa anshaxeed ee ku saabsan waaritaanka iyo xuquuqda aadanaha. Dabcan, moodada gaabis ah waxay noqotaa beddelka caanka ah, iyo noocyada awoodda leh ee warshadaha moodada ayaa kor u qaadaya isbeddelka.
Qayb ka mid ah tani waxay ku lug leedahay moodada "xilliyeed la'aan". Ciyaartoyda waaweyn ee booska moodada ayaa sameeyay dhibic si ay uga go'aan sii deynta xilliyeedka caadiga ah ee qaababka cusub tan iyo markii habkaas uu si dabiici ah u horseeday moodada degdega ah.
Waxa si ula kac ah loo sii daayay qaabab kuwaas oo dhaqan ahaan loo isticmaali jiray xilliyada kale. Tusaale ahaan, daabacaadaha ubaxa iyo pastel-ka ayaa caadi ahaan lala xiriiriyay khadadka moodada guga, laakiin noocyada qaar ayaa ku daray daabacadahan dayrta.
Hadafka abuurista moodo aan xilli lahayn iyo ka-hortagga isbeddellada xilliyeedka waa in lagu dhiirrigeliyo macaamiisha iyo naqshadeeyayaasha kale inay oggolaadaan in qaybaha ay ku sii jiraan qaabkooda in ka badan laba bilood. Tani waxay u oggolaaneysaa alaab-qeybiyeyaasha inay abuuraan qaybo tayo sare leh oo leh calaamado qiimo sare leh kuwaas oo loogu talagalay inay socdaan xilliyo badan.
Waxay noqon doontaa mid xiiso leh in la arko sida isbeddelkani u socdo horay u socda sababtoo ah noocyo badan oo fashion ah ayaan weli qaadan dhaqamadan. Si kastaba ha noqotee, maadaama hogaamiyayaasha warshadaha ay qaadeen hindisaha, ganacsiyo badan ayaa laga yaabaa inay raacaan hogaanka.
7. Wax iibsiga onlaynka ah ayaa horumarisa
Wax iibsiga internetka ayaa noqday mid aad u caan ah sannadihii la soo dhaafay, si kastaba ha ahaatee, macaamiil badan ayaa ka labalabeynaya inay dharka ka iibsadaan internetka maadaama ay rabaan inay awoodaan inay arkaan sida shaygu ugu habboon yahay. Sannadii la soo dhaafay, waxaan aragnay soo ifbaxa tignoolajiyada xallinta dhibaatadan.
Dukaamada tafaariiqda ecommerce waxay horumarinayaan khibrada wax iibsiga ee khadka tooska ah iyagoo kaashanaya xaqiiqada dhabta ah iyo farsamada dhabta ah ee la kordhiyay. Labadan teknooloojiyadani waxay siinayaan dukaamaystayaal awood ay ku isticmaalaan qol ku habboon si ay u arkaan sida shaygu u ekaan doono nolosha dhabta ah.
Waxa jira dhawr apps oo taageera mudaaharaadka noocan ah. Tiknoolajiyadan ayaa wali la dhammaystiray, markaa waxay u badan tahay in tafaariiqleyaal badan oo badan ay ka hirgelin doonaan bakhaaradooda internetka sanadaha soo socda.
8. Isku-dhafan ayaa adkaada
Sannado badan, oo lagu daray cabbirka dumarka ayaa waqti adag ku helay noocyo badan oo dhar ah oo ku habboon noocyada jirkooda. Noocyo badan ayaa iska indho-tiray haweenkan waxayna ku guuldareysteen inay abuuraan qaabab ku habboon dadka aan xiraneynin halbeeg yar, dhexdhexaad ah, weyn ama ka weyn.
Jirka toganku waa isbeddel soo koraya oo qadarinaya jidh kasta oo qaabab iyo cabbirro leh. Tani waxay keentay ka-qaybgalka moodada marka la eego cabbirrada iyo qaababka la heli karo.
Sida ku cad daraasado ay sameeyeen Alibaba.com, suuqa dharka dumarka oo lagu daray ayaa la filayaa in lagu qiimeeyo 46.6 bilyan USD dhamaadka sanadkan taas oo laba jibaarantay sidii lagu qiimeeyay saddex sano ka hor. Tani waxay ka dhigan tahay in dumarka lagu daray-xajmiga ay leeyihiin fursado dhar oo ka badan weligood.
Ku-darsashadu halkan kuma dhammaanayso. Noocyada sida SKIMS waxay abuurayaan qaybo "qaawan" iyo "dhexdhexaad ah" kuwaas oo u shaqeeya wax ka badan dadka midabada maqaarka ee caddaaladda ah.
Noocyo kale ayaa abuuraya khadad dhar ah oo loo wada dhan yahay kuwaas oo daboolaya xaalado caafimaad oo kala duwan oo u baahan qalab joogto ah, sida tuubooyinka iyo matoorada insulinta.
Marka lagu daro abuurista qaabab u shaqeeya noocyo badan oo dad ah, warshadaha moodada waxay ku daraan matalaad badan ololahooda. Noocyo badan oo horusocod ah ayaa shaqaaleysiiya moodooyin jinsiyado kala duwan leh oo leh noocyo kala duwan oo jidheed si ay macaamiil badan u arki karaan dadka iyaga u eg joornaalada, boorarka xayaysiinta, iyo xayaysiisyada kale.
9. Qorshayaasha lacag-bixinta oo diyaar ah
Qaar badan oo tafaariiqleyaal ah ayaa siinaya macaamiisha awood ay ku bixiyaan lacag-bixinta iibsashada ka dib. Tusaale ahaan, iibsaduhu waxa uu dalban karaa $400 oo kaliya waxa uu bixin karaa $100 wakhtiga iibka ka dibna waxa uu ku bixin karaa baaqiga soo hadhay lacag bixin siman saddexda bilood ee soo socota.
Habkan "Buy Now, Pay later" (BNPL) wuxuu u oggolaanayaa macaamiisha inay kharash gareeyaan lacag aysan qasab ahayn inay haystaan. Tani waxay ka dhex bilaabatay noocyada moodooyinka hoose, waxayna ku sii qulqulaysaa naqshadeeyaha iyo booska raaxada.
Tani weli waa wax cusub oo ay jirto macluumaad yar oo ku saabsan sida tani u saameyn doonto warshadaha mustaqbalka fog.
Aad bay u adag tahay in la saadaaliyo sida moodada iyo dharka warshadaha ay u ekaan doonaan 2021 maadaama aan wali ku dhex jirno masiibo. Weli waxaa jira hubanti la'aan badan, dad badanina wali kuma noola sidii caadiga ahayd, markaa way adag tahay in la sheego haddii ama goorta hab-dhaqanka macaamiishu uu ku soo noqon doono sidii hore.5.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jirta fursad wanaagsan oo ah in isbeddellada la xidhiidha tiknoolajiyada cusub iyo kuwa la hagaajiyay iyo miyir-qabka bulshada ay sii wadi doonaan in muddo ah. Tiknoolajiyadu waxay u badan tahay inay sii wadi doonto inay horumarto, dadkuna waxay si aad ah u qadarin doonaan miyir-qabka bulshada markay noqdaan kuwo aad u baraarugsan oo wax ku bartay arrimaha cakiran ee caalamiga ah.
Talooyin ku saabsan iibinta dharka Alibaba.com
Alibaba.com waxay fududaysaa wax kala iibsiga ka dhexeeya iibsadayaal iyo iibiyayaal badan oo warshadaha moodada ah. Haddii aad qorsheyneyso inaad dharka ku iibiso Alibaba.com, waxaa jira dhowr waxyaalood oo aad sameyn karto si aad u kordhiso soo-gaadhista alaabtaada oo aad iibiso badan sameyso.
Aynu eegno dhawr ka mid ah tabaha ugu sarreeya ee wax lagu iibiyo ee madalkeenna.
1. U fiirso isbeddellada
Warshadaha moodada ayaa had iyo jeer isbedela oo horumaraya, laakiin qaar ka mid ah isbeddellada aan aragnay sannadkii hore ayaa laga yaabaa inay dejiyaan codka sanadaha soo socda.
Isku-darka iyo doorbididda moodada waara, tusaale ahaan, waa laba isbeddel oo guud ahaan iftiiminaya iftiinka summada. Ma khaldami kartid inaad ku darto qaar ka mid ah dhaqamada bulsheed miyirka leh ee ganacsigaaga.
Intaa waxaa dheer, ku darida xaqiiqada dhabta ah iyo xaqiiqada la kordhiyay waxay kaa caawin kartaa inaad la socoto ganacsiyada kale ee warshadaha.
Uma baahnid inaad bedesho dhamaan hadafkaaga ama aad u bedesho hawlahaaga si aad si fiican ula jaanqaado isbeddellada, laakiin la-socoshada waxa ku cusub warshadaha waxay ku siin kartaa lug aad ku gasho tartankaaga taas oo dayacday samaynta sidaas.
2. Isticmaal sawiro xirfad leh
Mid ka mid ah siyaabaha ugu fiican ee liiskaaga dharka looga dhigi karo mid ka duwan inta kale waa inaad isticmaasho sawiro xirfad leh. Qaado wakhti aad ku sawirto dharkaaga noocyo kala duwan iyo xaglo kala duwan.
Tani waxay u egtahay mid aad uga soo jiidasho badan marka loo eego dharka lagu dhejiyay mannequin ama sawir lagu dhejiyay sawirka moodeel.
Markaad sawirro ku dhow ka qaadatid tolida iyo dharka xaglo kala duwan, taas oo siinaysa dadka isticmaala fikrad wanaagsan oo ku saabsan sida dharku u ekaan doono nolosha dhabta ah.
3. Hagaaji alaabta iyo sharraxaadaha
Alibaba.com waa goob suuq ah oo adeegsata makiinadaha raadinta si ay uga caawiyaan iibsadayaasha inay helaan waxyaabaha ay raadinayaan. Taasi waxay ka dhigan tahay inaad ku wanaajin karto alaabtaada iyo sharraxaadaha ereyada muhiimka ah ee dhageystayaasha bartilmaameedka ahi ay raadinayaan.
4. Bixi wax-ka-beddelid
Iibsadayaal badan ayaa raadiya qaybo gaar ah, haddii ay hoos ugu dhacdo doorashada midabada ama ku darista calaamado. Diyaar u noqo inaad dejiso haddii aad haysato agab aad sidaas ku samayso. Ku muuji astaantaada iyo bogga liiska alaabta ee aad bixiso Adeegyada OEM ama waxay leeyihiin awoodaha ODM.
5. Soo dir muunado
Maadaama ay jiraan noocyo badan oo tayada dharka ah oo la heli karo (iyo la doonayo) warshadaha moodada, macaamiishaadu waxay u badan tahay inay qadarin doonaan muunado si ay u hubiyaan inay iibsanayaan waxay raadinayaan. Habkaas ayay naftooda u dareemi karaan dunta oo ay u arkaan maqaallada nolosha dhabta ah.
Iibiyeyaal badan ayaa isticmaala tirada dalabka ugu yar si looga hortago macaamiishu inay isku dayaan inay iibsadaan alaabooyin gaar ah oo dhar ah oo qiimo jaban ah. Waxaad taas ku heli kartaa adigoo soo diraya muunado qiimaha tafaariiqda.
6. Horay u sii qorshee
U diyaari qulqulka iibka dharka xilliyeedka ka hor wakhtiga. Haddii aad jaakadaha ka iibiso meheradaha ku yaal meel ay cimiladu ka bilaabato bisha Diisambar, hubi in iibsadayaashaadu kayd leeyihiin Sebtembar ama Oktoobar.
Xitaa haddii iibsadayaashu ay u socdaan dhinaca moodada "xilliyeed la'aanta", weli waxaa jira baahida loo qabo maqaalladan dharka ah sida cimiladu isbeddelayso sanadka oo dhan.
Cinwaanka: South Yard, XiaoAnShe Aagga Warshadaha, Degmada Xin Hua, Shijiazhuang, Shiinaha
Isku qor warsidahayaga